Hadalkii Qoor-qoor Maxaa Loo Fasiran Karaa? | Gaaroodi News
Hadalkii Qoor-qoor Maxaa Loo Fasiran Karaa?
August 18, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-qoor) ayaa baaq u diray madaxda dowlad goboleedyada ka maqan shirka dhuusamareeb-3 oo ay ku ballan sanaayeen madaxda Dowlad Goboleedyada iyo dowladda Federaalka.
Madaxweyne Qoor-qoor oo xalay ka hadlau Dhuusa Mareeb wuxuu sheegay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ee ka maqan shirka ay ku han weyn yihiin iney ku soo biiraan kulanka ka socda Dhuusamareb.
“Waxaa lagu macneyn karaa iney jirto kalsooni darro ay ku qabaan madaxweynaha, sababtoo ah kaddib markii la laabtay shirkii Dhuusamareeb 2 waxaa dhacay falal ay ka mid ahaayeen in raysal wasaarihii la riday, waxaa dhacday in guddigii farsamada ee lagu ballansanaa iney Dhuusamareeb ku shiraan aysan ku shirin.
“Waxaa kaloo dhacday in madaxweyne Farmaajo uu soo maray baarlamaanka uuna u ballan qaaday in waxkastoo ka soo baxo shirka Dhuusamareeb ay go’aanka ugu dambeeya iyaga leeyihiin, waxyaabahaasi oo dhan waxay abuureen dareen ah in Farmaajo uu doonayo inuu arrinta ku socodsiiyo sida isag uu wax u rabo.” ayuu yiri Max’ed Axmed Shekh Cali oo BBC-da u warramay. Kulan hore oo ay baarlamaanku yeesheen
Dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayaa Sabtidii golaha shacabka u jeediyay khudbad nuxurkeedu ahaa in heshiis kasta oo lagu gaaro Dhuusamareeb uu ku soo celin doono golahaasi.
“Waxaa intii mudda ahba jiray culeys iyo khilaaf u dhaxeeya madaxwyenayaasha Puntland iyo Jubaland hase yeeshe waxaa kalsooni abuuray shirkii Dhuusamareeb oo u muuqday iney isu soo dhowaadeen madaxda waxaana la filayay in shirkan dambe uu noqda mid mira dhala balse haatan ima muuqato rajadaasi”.
“Madaxweyne Qoor-Qoor oo fidiyay gogosha shirka ayaa waxay ahayd inuu halkii ka sii wado dadaalkiisa balse khudbadda uu jeediyay waxay u muuqatay inuu la saftay madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka sidaa darteed laba saf ayay noqdeen oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye waa uu ka baxay dhex-dhexaadnimadii.” Madaxweyne Deni iyo kuxigeenkiisa Karaash
Dhinaca kale Jubbaland ayaa war ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan shirka Dhuusamareeb 3 iyadoo ugu baaqday in Beesha Caalamka ay Soomaalida ka caawiso qabsoomidda shirkaasi oo loo dhan yahay, lagana mira dhaliyo natiijooyinkiisa.
Hadallada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay meesha ka saareyaan kalsoonidii lagu qabay in Soomaali kaligeed oo aysan jirin cid dhex-dhexaaddineyso ka tashadaan aayaha dalkooda.